Mooshinka Farmaajo: Maxay tahay hannaanka loo maro in madaxweynaha Soomaaliya xilka laga qaado | Baydhabo Online
Xildhibaano katirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in guddoomiyaha ay u gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Guddoomiyaha golaha shacabka, Maxamed Mursal ayaa sheegay inuu qabtay mooshin ka dhan ah madaxweynaha.
Xildhibaanada gudbiyay mooshinka ayaa ku doodaya in ay soo dhameystireen tiradii loo baahnaa, ayna ka war sugayaan guddoonka golaha shacabka.
Dad badan ayaa haddaba isweydiinaya qaabka loo mari karo xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya.
Qoddobaka 92aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya ee aana wali aftida loo qaadin ayaa dhigaya in xil ka qaadista madaxweynaha ay soo jeedin karaan xildhibaanada golaha shacabka marka madaxaweynaha lagu eedeeyo khiyaano qaran, xadgudub culus oo dastuuri ah ama ku xadgudub sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Isla qoddobka 92aad ee dastuurka Soomaaliyaa farqadiisa 2aad ayaa sidoo kale dhigaya in hindisaha xil ka qaadista Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay golaha horkeeni karaan ugu yaraan saddex dalool hal dalool (1/3) xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
Sidoo kale isla qoddobkaasi ayaa dhigaya in Maxkamadda Destuuriga ay dhageysato eedeynta loo soo jeedinayo Madaxweynaha inay sal leedahay, waxaana haddii ay go’aamiso maxkamaddu inay eedayntu sal sharci leedahay, saddex dalool labo (2/3) ee labada aqal ee Baarlamaanka ay xilka ka qaadi karaan madaxweynaha.
Haddii Madaxweynaha xilka lagaga qaado si waafaqsan faqradaha 1aad ilaa 3aad ee qodobkan, waxaa xilka madaxweyninimo la wareegaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
Jiritaanka maxakamadda destuuriga
Soomaaliya oo aysan iminka ka jirin maxkamadda dastuuriga ayaa haddaba waxaa uu ismarin wa’a ka taaganyahay halka loo laabanayo maxkamaddii dhageysan laheyd eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha, waxaana dadka qaar ay qabaan aragti ah in mar haddii aysan jirin maxkamaddii dastuuriga ee loo laaban lahaa ay tahay in loo laabto maxkamadda sare, si ay u dhageysato eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in golaha shacabka uu go’aan ka gaaro arrintan.
Maxaa xal ah maxaase aan xal aheyn?
Maxkamadda dastuuriga oo aan dalka ka jirin iyo dhinacyada siyaaasadda oo aad u kala fogaaday ayaa dadka qaar waxaa ay aaminsanyihiin in ay sii hurineyso xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya, arrintan aan la dhameystri karin iyadoo meesha ay ka maqan yihiin hay’adihii dowliga ahaa.
”Hay’adihii la rabay in arrintan ay dowr ku yeeshaan oo meeshan ka maqan iyo dadkii oo siyaasad ahaan kala fogaaday, daraf saddexaad oo dhexdhexaad ahna uusan jirin, waxaa qasab noqon doonto in xeer-Soomaali loo noqdo, hoosna loo wadahadlo”. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ibraahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Mooshinkan oo aanan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono ayaa waxaa ilaa iyo hadda aanan ka hadlin madaxtooyada Soomaaliya